Awwadaayitti deeggartootni fi mormitoonni mootummaa wal lolan - BBC News Afaan Oromoo
21 Guraandhala 2020
Magaalaa Awwadaayiitti deeggartootaa fi mormitoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi mudachu jiraattoonni magaalichaa BBC'tti himan.
Jiraattoonni BBC'n dubbisee akka jedhaniitti, hiriira mootummaa Abiy Ahimadii fi paartii isaanii deeggaruuf addabaabahii magaalichaatti bahamee kan ture yoo ta'u, gama biraatinis namoonni mootummaa Abiy mormuuf dhaadannoo qabatanii bahan akka turan jiraattoonni himaniiru.
Miseensi poolisii maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu tokko BBC'tti akka himeetti, ''MM Abiy deeggaruuf namoonni hiriira bahan, sana booda maaliif deeggaruuf baatanii jechuun namoonni morman hiriira bahuu jaqabani.
Kanaan kan ka'ees walitti bu'insii umameera'' jechuun attamiin jeequmsi akka umamee dubbata.
Miseensi poolisii kun akka jedhutti, namoonni dhagaafi uleedhaan miidhaman hedduun jiru.
Michooma Awwadaayi fi jimaa, hamma yaaddaniin olitti
Qeesii Harargeetti masjiidaafi bataskaana ijaarsisaa jiran
Walitti bu'insa garee lamaan jidduu ture bittinsuuf poolisoonni rasaasaa gara samiitti dhukaasaa turan kan jedhu miseensi poolisii kun, dhukaasa poolisiitiin namarra miidhaan qaqqabuusaa garuu akka hin beekne dubbata.
Miseensi poolisii kun akkas haa jedhu malee, rogeeyyiin viidiyoo wayita miseensoonni raayyaa ittisaa fi poolisoonni gara jibinaan jiraattoota reebaniifi ambulaansii namoota miidhaman kaasuuf dhaqee agarsiisu midiyaalee hawaasaa irratti qoodaa jiru.
Jiraataan magaalichaa biroo BBC'tti akka himeetti, 'qondaantonni mootummaa naannichaa MM Abiy deeggaruuf hiriira bahaa jedhanii jiraattota dhiphisaa turani' jedha.
Jiraatan magaalaa Awwadaayi kun akka jedhuutti, haaluma gaaffii qondaaltoota mootummaa naannichaatiin deegarsaaf wayita bahameetti kanneen morman waliin walitti bu'iinsi uumame.
''Kana gidduutti ammoo humnoonni tikaa eessaa akka dhufan hin beekamne magaalicha weeraran, achumaan jeequmsi umamee gara walitti bu'iinsaatti ce'amee,'' jedha.
Jiiraataan magaalichaa kun akka jedhutti, namoonni hiriira bahan kunneenis fedhasaaniitiin osoo hin taane dhiibaa fi dirqiidhaan ture.
Haa ta'u malee dhiibbaadhaan akka hiriira baanu taasifamne jechuun komii jiraattoonni dhiyeessan adda baasuuf BBC'n yaaliin taasise hin milkoofne.
Jiraataan kun akka jedhuttis humnoota tikaatiin reebichi namoota irratti raawwateera.
Haaluma kanaan wal qabatees daandiin cufaa turuufi booda keessa ammoo konkolaattoonni raayyaa ittisa biyyatiin dabaalamanii darbu eegalu jiraattoonni BBC'tti himan.
Walitti bu'iinsa umameen walqabatees namootaafi qabeenyaa irraa miidhaa qaqqabuun himamurreen mirkanneeffachuudhaaf yaaliin qondaaaltootaafi poolisii naannichaa argachuuf taasifne osoo nuuf hin milka'iin hafeera.
30 Muddee 2019
Daldala jimaa: Michooma Awwadaayi fi jimaa, hamma yaaddaniin olitti
Beela naannoo Amaaraa irratti suuraalee fi odeessaalee nama dogoggorsan
19 Fuulbaana 2021
Zarihun Wadaajoo - weellisaa waggoota 45 oliif aartiidhaan qabsaa'e
Barattoonni Keeniyaa 'nam-fakkii oyiruu keessa dhaaban' tolchaa jedhamuu maatiin komatan
Akka wal-fuudhan otoo beekanii 'natti heerumtaa' gaafachuun maaliif?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 4 Caamsaa 2021
Yuutuubaroota Itoophiyaa ji'atti birrii kuma 30 hanga kuma 220 argatan
Angeelaa Merkel akkamiin siyaasa addunyaa fi Awurooppaa jijjiirte?